जिल्लाका विभिन्न भागहरुमा भारी हिमपात, कतै मज्जा, कतै यातायात/संचार ठप्प, कतै कठांग्रियो जनजीवन ! – ebaglung.com
जिल्लाका विभिन्न भागहरुमा भारी हिमपात, कतै मज्जा, कतै यातायात/संचार ठप्प, कतै कठांग्रियो जनजीवन !
२०७५ माघ १२, शनिबार १८:००	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
घनश्याम गौतम, बागलुङ २०७५ माघ १२ । बागलुङ जिल्लाको अधिकाशं उच्च क्षेत्रमा भारी हिमपात भएसँगै हिउले अधिकासं स्थान सेताम्मे बनेका छन् । गल्कोट नगरपालिकाको अधिकासं उच्च स्थानमा भारी हिमपात भएको छ । हिमपातको कारण गल्कोट नगरपालिका बाड म्बर १० पाण्डबखानीमा बिद्युतको पोल ढलेको छ भने यातयात ठप्प भएको वडाध्यक्ष तिलक घर्तीले जनाकारी दिए ।
त्यस्तै गल्कोट नगरपालिकाका बिभिन्न क्षेत्र घुम्टे, कालीलेक, थालेपोखरा, माम्ले, निलुवा, हलहले भ्युटाबर लगाएतका स्थानमा भारी हिमपात भएको छ । गएराति बर्षासंगैं भएको हिमपातकाकारण जनजीवन कष्टकर बनेको छ । हिमपात सगैं अहिले अत्याधिक चिसो छ । ताराखोला गाउँपालिको डुँडे लेक, अर्गलको धुरी, गुरासे, लगायतका पहाडहरुमा भारी हिमपात भएको छ । हिमपातका कारण उच्च पहाडी बस्तीहरुमा जनजीवन प्रभावित भएको ताराखोला गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले जनाकारी दिए । घर्तीका अनुसार ताराखोलामा यातायात समेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् । हिमपातकै कारण गल्कोटमा शुक्रबार साझँ ८ बजेदेखी बिद्युत अबरुद्ध भएको छ । बिद्युत अबरुद्ध हुदा बिद्युतव्दारा सञ्चालन हुने उद्योग सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । काठेखोला गाँउपालिका र गल्कोट नगरपालिकाको सीमानामा बिद्युत पोल ढलेकोले बिद्युत आपुर्ति हुन नसकेको र मर्मतको काम भैरहेको नेपाल बिद्युत प्राधिकरण बितरण केन्द्र बागलुङले जनाएको छ ।
त्यस्नै नेपालकै एकमात्रै शिकार आरक्ष ढोरपाटन शिकार आरक्षमा शुक्रबार बिहानै देखी भारी हिमपात भएको छ । हिमपातका कारण बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका सर्वसाधारणको जनजीवन प्रभावित भएको छ । ढोरपाटन तथा निसीखोलाको उच्च क्षेत्रमा हिमपात भएको छ । श्क्रबार साँझदेखि पानीसँगै परेको हिमपातले स्थानीयको जनजीवन प्रभावित भएको निसीखोला गाउँपालिका–५ का स्थानीय तेजेन्द्र पुनले जानकारी दिए । चिसोका कारण स्थानीयहरु घर बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । भेडा च्याङ्ग्रा, गाइ भैँसीलाई दाना संकलन गर्न गाह्रो भएको ढोरपाटन नबीका मन बहादुर पुनले जानकारी दिए ।
ढोरपाटन तथा निसीको उच्च क्षेत्रहरु हिमपातले सेताम्मै बनेका बताईएको छ । लामो समयको खडेरीपछि पानीसँगै हिउँले परेपछि कृषकहरु खुसी भएका छन् । माथिल्लो क्षेत्रमा हिमपात भए पनि तल्लो भागमा पानी नपरेको स्थानीहरुको भनाई छ । जिल्लाका उच्च पहाडहरुमा गत बुधबार बिहानै देखी हिउँ परिरहेको स्थानियले बताएका छन् । जैमिनी नगरपालिकाको गाजाको धुरीमासमेत हिमपात हुदा बागलुङको सदरमुकाम वरपर, पन्चकोट, बिहुँकोट, गाजाको दह,धम्जा, तंग्राम फापर खेत लगायत जिल्लाको पश्चिम निसीभूजी, दक्षिण थन्थाप बलेवा भेगका उच्च भागहरु हिउँले ढाकिएको छ । गएराती देखी पर्न सुरु गरेको हिउँमा स्थानीयहरु रमाईरहेका छन् । आज गल्कोटका अधिकाशं हिउ परको स्थानमा पुगेर स्थानियले हिउँसहितका तस्बीर सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरका छन् ।
सोरबोट महिला समुहको भवन उद्घाटन गर्दै नगरप्रमुख नेपालीलीव्दारा रु २ लाखको अक्षयकोष स्थापना !
हिंउमा पुरिँदा निसीखोलामा एक जनाको मृत्यु !